Pabrikan'ny alimina vita amin'ny alimina alimina Anodized | Ouzhan
6063 aliminioma vita amin'ny alimina cnc
Ho fanampin'izany, ity vokatra ity dia misy fanoherana tsara ny fitafiana ary azo ampiasaina ho dingana ilaina amin'ny vokatra mifandraika amin'ny fiaramanidina sy aerospace. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny oxidation anodika sy ny oxidation anodic mafy: ny lokan'ny anodika dia azo lokoina, ary ny haingon-trano dia tsara lavitra noho ny oxidation anodika mafy. Hevitra fananganana: ny oksizena anodika dia mitaky fitaovana hentitra, ary ny akora samy hafa dia samy hafa ny vokany eo amin'ny endriny. Ny fitaovana ampiasaina matetika dia ny 6061, 6063, 7075, 2024, sns., Eo amin'izy ireo, ny 2024. dia ambany noho izy noho ny atin'ny CU samihafa ao amin'ilay fitaovana. Noho izany dia mavomavo ny ôksidansa mafy 7075, mavokely ny 6061, 6063, saingy ny 6061, 6063, ny anodized tsotra dia tsy dia misy fahasamihafana firy, fa ny 2024 kosa dia mazàna amin'ireo teboka volamena maro.
Fitsarana kalitao mahazatra tsy mahazatra
A. misy teboka miseho ambonin'ny. Ity karazana tsy fetezana ity dia matetika vokatry ny famonoana vy sy ny fifehezana na ny fitaovana ratsy. Ny fomba fitsaboana dia ny fanafana indray ny hafanana. Na ovao ny fitaovana.
B. loko avana no miseho eny ambonin'ny. Ity karazana tsy fetezana ity dia matetika vokatry ny hadisoan'ny fandidiana anode. Manjary tsy milamina izy rehefa mihantona, ka manjary tsy mandeha tsara ny vokatra. Vahaolana, de-energize ary avereno anodize.
C. ny mangana dia maratra ary voadidy mafy. Ity karazana tsy fetezana ity dia matetika vokatry ny fandidiana tsy mitandrina mandritra ny fitaterana na fanodinana, ary ny fomba fitsaboana dia ny famerenana ny herinaratra, ny poloney ary ny famelomana indray.
D. misy teboka fotsy miseho ambonin'izy ireo mandritra ny fandokoana. Ity tsy fetezana ity dia matetika vokatry ny solika na loto hafa ao anaty rano mandritra ny fiasan'ny anoda.
Fanondroana ny fenitra momba ny kalitao vita amin'ny metaly alimo
1. Ny hatevin'ny horonantsary dia 5-25um, ny henjana dia mihoatra ny 200HV, ny tahan'ny fiovan'ny lokan'ny andrana famehezana dia latsaky ny 5%.
2. Ny fanandramana famafazana sira dia mihoatra ny 36 ora, ary afaka mahatratra ny fenitra CNS ambonin'ny 9.
3. Ny bika aman'endriny dia tsy tokony ho maratra, maratra, rahona miloko, sns. Ny velaran'ny faritra vita amin'ny metaly aliminioma dia tsy tokony hanana trangan-javatra tsy ilaina toa ny teboka mihantona, mavo, sns.
Fanamarihana: ny ampahany vita amin'ny aliminioma maty, toy ny A380, A365, A382, sns.
Material Firaka alimina 6061, 6063, 7075, 2024
Previous: Ny radiatera alimina alimina dia mivoaka ampahany
Manaraka: Black anodized faritra 6061-T6 firaka vita amin'ny alimina aluminium